RASMI: Kooxda AC Milan oo ku dhawaaqday saxiixa laacib ay kala soo wareegtay Real Madrid – Gool FM
RASMI: Kooxda AC Milan oo ku dhawaaqday saxiixa laacib ay kala soo wareegtay Real Madrid
(Milano) 06 Luulyo 2019. Kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa ugu dambeyn xaqiijisay inay la soo wareegtay Theo Hernandez.
Kooxda ka dhisan garoonka San Siro ma aysan faah-faahin heshiiska ay Hernandez kaga soo qaadatay Real Madrid, laakiin kaliya waxa ay ku dhawaaqday inay la soo wareegtay.
Subaxnimadii hore ee saakay waxaa soo baxayey in heshiiska uu ciyaaryahankan ugu wareegay AC Milan la dhammaystiran, waxaana ay doonaysay Milan inay si joogto ah u wada iibsato halkii ay amaah ku qaadan lahayd.
Saacado kaddib kooxda AC Milan ayaa sii daysay muuqaal horudhaca ah oo ay ku xaqiijinayso saxiixa xiddigan, laakiin waxaa jira warbixin uu baahiyey Radio Rossonera oo sheegaya in heshiisku uu yahay amaah 2 milyan oo euro ah oo xagaaga dambe ay Milan laacibkan ku iibsanayso 18 milyan oo euro.
Yeelkeede, Theo Hernandez hadda waa xiddig ka tirsan kooxda kubadda cagta AC Milan, faah-faahinta heshiiska uu ugu biiray AC Milan dib ayaan idinkaga soo gudbin doonnaa hadduu Eebbe yiraahdo.
Waa kuma Daafaca uu Sir Alex Ferguson doonayo inay Kooxda Man United la soo saxiixato xagaagan?
Xulka Nigeria oo iska xaadiriyay wareega siddeed dhamaadka koobka qarammada Afrika, kaddib markii ay garaaceen Cameroon … + SAWIRRO